DIPLOMASIA SY FAMPANDROSOANA: Mafy orina ny fiarahamiasa eo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeanina – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 11:40
Ny Filoha Andry Rajoelina no nitarika ny fihaonana.
Accueil/Politika/DIPLOMASIA SY FAMPANDROSOANA: Mafy orina ny fiarahamiasa eo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeanina
DIPLOMASIA SY FAMPANDROSOANA: Mafy orina ny fiarahamiasa eo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeanina
Notanterahina teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha omaly 19 novambra 2021 ny dinika politika faha-9 teo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeana. Fihaonana izay notarihin’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Andry Rajoelina. Lafin-javatra maro no voadinika nandritra ny fihaonana, izay nahitana taratra ny fiarahamiasa matotra eo amin’ny Firenena malagasy sy ny Vondrona Eoropeanina.
Hevi-dehibe telo no nifantohan’ny dinika politika teo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeanina. Tafiditra ao anatin’izany ny lafiny fahaiza-mitantana ny zava-misy ara-politika sy ara-toekarena, ny zon’olombelona sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeana. Ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Andry Rajoelina no nitarika ny fotoana, nontronin’ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta Ntsay Christian ary ireo minisitra sy tomponandraikitra ambony isan-tsokajiny. Etsy ankilany kosa ny Vondrona Eoropeana izay nahitana an’i SEM.Giovanni Di Girolamo, masoivohon’ny Vondrona Eoropeana miasa eto Madagasikara, ireo masoivohon’i Alemana sy Frantsa. Nandray anjara tamin’ny dinika nampitain-davitra kosa ny masoivohon’ny Finlande sy Portugal ary ireo solontenan’i Belgique sy ny Repoblika Tchèque, Espagne ary Italie.
Tanjon’ity fihaonana ity ihany koa, araka ny fanazavana, ny hamaritana ireo tetikasa laharam-pahamehana ho an’i Madagasikara, mba hisian’ny tena fampandrosoana marina. Nahitam-bokany mivaingana sy azo tsapain-tanana, araka ny nambaran’ny Filoha, ny tetikasa teo aloha niara-niasa teo aloha.
Tamin’ny ankapobeny, seha-piarahamiasa maro eo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeana no voaresaka omaly, toy ny asa fanarenana taorian’ny valanaretina covid-19, ny fanavaozana ny rafi-pifidianana, ny tranga any Atsimon’i Madagasikara, ny fanjakana tsara tantana sy ny ady amin’ny kolikoly, ny zon’olombelona, ny fandriam-pahalemana amin’ny fari-dranomasina ary ireo fiaraha-miasa ho an’ny fampandrosoana eo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeana. Mikasika ny valan’aretina Covid-19 dia hohamafisina ny fanentanana amin’ny fanaovam-baksiny ary hodinihin’ny roa tonta miandalana ny fanekena iraisana ireo “certificat de vaccination” na ny eto amintsika na ny avy any ivelany.
Fifidianana sy fiovaovan’ny toetrandro
Etsy ankilany, amin’ny Martsa 2022 ho avy izao, mikasa handefa mpanara-maso ny fifidianana tahaka ny fanaony hatramin’ny taona 2018 ny Vondrona Eoropeana. Ny tanjon’izany iraka izany dia ny hidinika ireo soso-kevitra araky ny tatitra naroson’ireo iraky ny Vondrona Eoropeana taorian’ny fifidianana tamin’ny taona 2018. Noho ny fahamatoran’ny rafi-pifidianana eto Madagasikara dia nifanaiky ny roa tonta fa tokony hatao laharam-pahamehana ny fahamarinan-toerana ireo « normes juridiques » mba tsy hamelana ny fifanolanana ara-politika.
Etsy andaniny, mikasika ny fiovaovan’ny toetrandro izay mihatra mivantana amin’ny vahoaka Malagasy indrindra any amin’ny Faritra Atsimo, dia miara-dalana ary manohana hatrany ny vinan’ny Fitondram-panjakana, na amin’ny Hamehana na amin’ny lavitr’ezaka, ny Vondrona Eoropeana. Mankasitraka ihany koa ny ezaka ataon’ny Fitondram-panjakana Malagasy amin’ny fampiharana ny zon’ny olombelona indrindra eny anivon’ny fonja ny Vondrona Eoropeana. Ankoatra izay dia noresahan’ny roa tonta ihany koa ny hampiharana ny andiany faha-11 amin’ny Fonds Européen de Développement izay ho soloin’ny fandaharan’asa 2021-2027 ny Vondrona Eoropeana.
FIFANINANANA ROBOTIKA : Madagasikara no nahazo ny mari-pankasitrahana betsaka indrindra
TETIKASA MIAMI: Ho vitaina mialohan’ny farany taona 2021 ny dingana faharoa
FIVORIANA TSY ARA-POTOANA: Hodinihina ny lalàna mahakasika ny Antenimierandoholona